4 Khuraafaad wax soo saar Video ah iyo xalkooda | Martech Zone
4 Khuraafaadka Waxsoosaarka Muuqaalka ah iyo Xalkooda
Arbacada, Agoosto 21, 2013 Sabtida, Janaayo 23, 2021 Douglas Karr
Waxaan ku dhiirigelinay dhammaan macaamiisheenna inay ka faa'iideystaan ​​fiidiyowga iyada oo qayb ka ah istiraatiijiyadda suuq geynta internetka. Qaar badan oo ka mid ah martidaada websaydhka ah ayaa gebi ahaanba ka tagaya bartaada maxaa yeelay fiidiyow ma jiro.
Qaar kale xitaa halkaas kama samaynayaan maxaa yeelay fiidiyowyadaadu kuma soo baxaan natiijooyinka raadinta fiidiyowga. Youtube wuxuu sii wadaa inuu noqdo mashiin hogaamiya raadinta ka dambeysa Google… waana suuq sii kordhaya.
Taasi waxay tiri, waxaa jira fikrado qaldan oo badan oo ku saabsan muuqaalka fiidiyowga marka loo eego kakanaanta iyo qiimaha. Hoos waxaa ku yaal afar quraafaad oo baahsan oo la xiriira soosaarka fiidiyowga iyo sida xalalku u jecel yihiin Shabakadaha SoMedia caawin kara:
Dhamaan wax soo saarka fiidiyowga ee xirfadleyda ah waa qaali - Dhaqan ahaan, soo saarista fiidiyowga waxay ku kici kartaa ugu yaraan $ 1,150 saacaddii iyo wixii ka badan. Shabakada SoMedia Video Muhiim ah waa madal ka kooban 3,000 oo sawir qaadeyaal badan. Mashruucu wuxuu u oggolaanayaa fiidiyowyada ganacsiga ee la qaadi karo ee caadiga ah inay ku kacaan meel kasta oo ka ah $ 450 illaa $ 1,499 iyadoo kuxiran dhererka
Wax soosaarka fiidiyoowga ee heerka-xirfadeed waa waqti badan - Si loo toogto, loo tafatiro loona soo saaro fiidiyow tayo sare leh oo loo isticmaalo in lagu qaado meel kasta oo laga bilaabo dhowr toddobaad illaa dhowr bilood iyada oo ku xidhan dhererka. SoMedia waxay habeysay hannaanka hal-abuurka iyadoo la horumarinayo nidaam maamul oo ku dhex jira dariiqa ku saleysan dariiqa xirfadleyda. Natiijo ahaan, mashruucyada fiidiyowga ayaa lagu dhammeeyaa 14 maalmood gudahood hawsha.
Helitaanka iyo shaqaalaynta sawir qaadaha saxda ah ayaa ah qaybta waqtiga ugu badan qaadata - Ilaa hada, shaqaalaynta sawir qaade aan talo shaqsiyeed laheyn wey adkeyd mararka qaarna qatar badan. Maanta, SoMedia waxay horay u-baareysay oo ay shaqaalaysiisay in ka badan 3,400 xirfadlayaal warshadeed oo tayo leh oo ay ku jiraan agaasimayaal, soo saareyaal iyo sawirqaadeyaal. Dhammaan xirfadlayaashan waxaa hubiyay SoMedia si loo hubiyo adeeg heer sare ah.
Soo-saaridda waa inay ka dhacdaa hal saqaf hoostiisa, haddii si habboon loo qabanayo - Dib ugu soo noqoshada istuudiyaha wax soo saarka ayaa loo isticmaali jiray habka ugu wanaagsan ee loola socdo habka fiidiyowga loona soo ururiyo badeecada dhammaatay. Adeegga dariiqa ku saleysan ee SoMedia wuxuu ku bixiyaa gaarsiinta dhijitaalka ah 14 maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda bilowga. Waxaa lagu soo saaray tayo sare waxaana lagu heli karaa qaab kasta, hawlgalka daruurta ku saleysan ayaa la tartamaya soosaarka fiidiyowga ee soo jireenka ah.
Hadaad ku qalabeeyay meheraddaada qalab fiidiyow oo aad u wanaagsan, qaar aad u fiican Nalalka 3-dhibic, oo aan jeclaan lahaa inaad duubto naftaada, waxaa jira waxyaabo kale oo beddel ah. Waad iskaashi la sameysan kartaa si aad u soo saarto fiidiyahaaga aalado sida WeVideo or Dhaqaaqe.
Tags: cantaloupesomediaficil videowax soo saarka videovideographer